सन्तोश पन्त किन विक्की देखेर जिल्ल परे तर भरतमणिलाई पारसको रुपमा देखेर हासेको हासेकै गरे ? खुल्यो यस्तो रहस्य (भिडियो सहित) भिडियो – Taja Khawar
सन्तोश पन्त किन विक्की देखेर जिल्ल परे तर भरतमणिलाई पारसको रुपमा देखेर हासेको हासेकै गरे ? खुल्यो यस्तो रहस्य (भिडियो सहित) भिडियो
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र १७, २०७८ समय: ०:२४:५७
यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा कमेडी च्याम्पियन सिजन – २ को गत एपिसोड चर्चामा छ । कारण हो भरतमणि पौडेल र विक्की अग्रवालले गरेको प्रस्तुती । पारस शाहको गेटअप र हाउभाउ सहित उनको चरित्रलाई कमेडि मार्फत् प्रस्तुति दिएका भरतमणि पौडेलले आम दर्शकको मन जितेका छन् । उनैको प्रस्तुतिले यतिबेला चर्चा बटुलेको छ ।
तर नयाँ शैलीबाट दर्शक हसाउँने उदेश्यले कमेडी च्याम्पियनमा फरक प्रस्तुती दिएका विक्की अग्रवाल भने वि,वादमा तानिए । कारण कमेडी च्याम्पियनका निर्णयक सन्तोष पन्तको टिप्पणी । उनको टिप्पणी पछि धेरेले सन्तोष पन्तको ‘कला–चेत’माथि नै प्रश्न उठाएका छन् । ‘हाम्रो समाजले यसलाई बुझ्दैनन्, मैले त बुझिनँ’ भन्ने टिप्पणीले यतिबेला सन्तोष पन्तलाई नै अफ्टेरो पारेको छ । यही चर्चाको बिषयलाई लिएर पुन्य गौतम र तिलक कार्कीले आफ्नो बिचार राखेका छन हेरौ भिडियो
Last Updated on: September 2nd, 2021 at 12:24 am